2 Madzimambo 2 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Madzimambo 2:1-25
2 Zvino Jehovha paakanga ava kuda kukwidza Eriya+ kumatenga ari mudutu,+ Eriya naErisha+ vakabva kuGirigari.+
2 Eriya akati kuna Erisha: “Ndapota, gara pano, nokuti Jehovha andituma kuBheteri.” Asi Erisha akati: “NaJehovha mupenyu+ uye nomweya wenyu mupenyu,+ handisi kuzokusiyai.”+ Naizvozvo vakaenda kuBheteri.+
3 Vanakomana vevaprofita+ vaiva kuBheteri vakabva vauya kuna Erisha, vakati kwaari: “Munozviziva here kuti nhasi Jehovha achabvisa tenzi wenyu kuti arege kuva mukuru wenyu?”+ Iye akati: “Ndinozviziva.+ Nyararai.”
4 Zvino Eriya akati kwaari: “Erisha, ndapota gara pano, nokuti Jehovha andituma kuJeriko.”+ Asi iye akati: “NaJehovha mupenyu uye nomweya wenyu mupenyu, handisi kuzokusiyai.” Naizvozvo vakasvika kuJeriko.
5 Vanakomana vevaprofita vaiva kuJeriko vakabva vaenda kuna Erisha, vakati kwaari: “Munozviziva here kuti nhasi Jehovha achabvisa tenzi wenyu kuti arege kuva mukuru wenyu?” Iye akati: “Ndinozviziva. Nyararai.”+
6 Zvino Eriya akati kwaari: “Ndapota, gara pano nokuti Jehovha andituma kuJodhani.”+ Asi iye akati: “NaJehovha mupenyu uye nomweya wenyu mupenyu, handisi kuzokusiyai.”+ Naizvozvo vakaenda vari vaviri.
7 Zvino kwaiva nevarume makumi mashanu vevanakomana vevaprofita vakaenda, vakaramba vamire pavaioneka vari nechokure;+ asi ivo vari vaviri vakamira pedyo naJodhani.
8 Eriya akabva atora nguo yake yebasa,+ akaipeta, akarova mvura, ikakamukana zvishoma nezvishoma imwe ichienda uku imwe uko, zvokuti vari vaviri vakayambuka nepanyika yakaoma.+
9 Zvino vachangoyambuka, Eriya akati kuna Erisha: “Kumbira chandingakuitira ndisati ndabviswa kwauri.”+ Erisha akati: “Ndapota, itai kuti zvikamu zviviri+ zvomudzimu+ wenyu zviuye kwandiri.”+
10 Iye akati: “Wakumbira+ chinhu chakaoma. Kana ukandiona pandichabviswa kwauri, zvichaitika kwauri saizvozvo; asi kana ukasandiona, hazvizoitiki.”
11 Zvino sezvavakanga vachifamba vachitaura zvavo, vakaona ngoro yehondo+ yomoto nemabhiza omoto, uye zvakavaparadzanisa; uye Eriya akakwira kumatenga ari mudutu.+
12 Nguva yose iyi Erisha akanga achizviona, uye akanga achishevedzera achiti: “Baba vangu, baba vangu+ kani, ngoro yehondo yaIsraeri nevatasvi vake vemabhiza!”+ Haana kuzomuonazve. Naizvozvo akabata nguo dzake akadzibvarura nepakati.+
13 Pashure paizvozvo akanhonga nguo yaEriya yebasa+ yakanga yadonha ichibva paari, akadzokera, akamira pamhenderekedzo yaJodhani.
14 Akabva atora nguo yaEriya yakanga yadonha ichibva paari, akarova mvura+ akati: “Jehovha, Iye Mwari waEriya ari kupi?”+ Paakarova mvura yacho, yakabva yakamukana zvishoma nezvishoma imwe ichienda uku imwe uko, zvokuti Erisha akayambuka.
15 Vanakomana vevaprofita vaiva kuJeriko pavakamuona achiri kure, vakatanga kuti: “Mudzimu+ waEriya wagara pana Erisha.” Naizvozvo vakauya kuzomuchingura, vakamukotamira.+
16 Vakati kwaari: “Zvino tarirai, vashandi venyu vane varume makumi mashanu, vanhu vakashinga. Tapota, regai vaende, vatsvake tenzi wenyu. Zvimwe mudzimu+ waJehovha wamusimudza, ukamukanda pane rimwe gomo kana kuti mune mumwe mupata.” Asi iye akati: “Musavatuma.”
17 Ivo vakaramba vachimumanikidza kusvikira ava kunyara, zvokuti akati: “Vatumei.” Zvino vakatuma varume makumi mashanu; uye vakaramba vachitsvaka kwemazuva matatu, asi havana kumuwana.
18 Pavakadzoka kwaari, iye akanga achigara muJeriko.+ Akabva ati kwavari: “Handina here kuti kwamuri, ‘Musaenda’?”
19 Kwapera nguva yakati, varume veguta racho vakati kuna Erisha: “Zvino tarirai, guta riri panzvimbo yakanaka,+ sokuona kuri kuita tenzi wangu; asi mvura+ ndiyo yakaipa, uye nyika iri kuita kuti pamuviri pabve.”+
20 Iye akati: “Nditorerei ndiro duku itsva, muise munyu imomo.” Naizvozvo vakauya nayo.
21 Akabva abuda, akaenda pachitubu chemvura yacho, akakanda munyu mukati macho,+ akati: “Zvanzi naJehovha, ‘Ndiri kuita kuti mvura iyi ive noutano.+ Haizokonzerizve rufu kana kuita kuti pamuviri pabve.’”
22 Mvura yacho ichakaporeswa kusvikira nhasi,+ maererano neshoko raErisha raakataura.
23 Zvino akabva ikoko akaenda kuBheteri.+ Zvaakanga achienda ari munzira, vakomana+ vaduku vakabuda muguta, vakatanga kumunyomba,+ vakaramba vachiti kwaari: “Iwe nyamhanza,+ kwira! Iwe nyamhanza, kwira!”
24 Iye akazotendeuka, akavaona, akavatuka+ achishandisa zita raJehovha. Mhuka hadzi mbiri dzinonzi mabheya+ dzakabva dzabuda musango, dzikabvambura-bvambura vana vacho vose makumi mana nevaviri.+
25 Akabva ipapo akaramba achienda kuGomo reKameri,+ akazobva ikoko akadzokera kuSamariya.